Fikradaha naqshadda 24 Laabatada Loogu Talagalay Ragga iyo Dumarka - Fikradaha Fikradaha Madadaalo
Haddii aad ku saabsan tahay inaad hesho qayb ka mid ah jirkaaga oo la qoray, waa inaadan dhicin inaad bixiso kharashka habboon ee taas. Wax kastoo la tixgeliyey, waxay ku jiri doontaa jirkaaga weligiis! Tani waa sababta aad u heli lahayd tattoo qurux badan.
1. Tattoos Super Lact quruxsan
2. Tattoo jilicsan oo muuqaal ah
Tattoo aad u qurux badan oo isboorti ah waa wax ay dadku isticmaalayaan si ay u eegaan cabsi aan caadi ahayn. Tani waa sababta tashadaan tikidhadu ay tahay mid cajiib ah.
3. Tattoo fudud oo fudud
Tani waxay ku saleysan tahay khidmadda sirta ah ee waxtarka leh ee maamulka kale ee aad si joogto ah u codsan kartid.
4. Tartanka jilitaanka jilicsan
Heerka maamulka heerkeedu, waa ka weyn yahay eedeymaha.
5. Tattoo jilicsan
Waxaad si dhakhso ah u fahmi doontaa in aysan u qalmin in laga yareeyo laba ama saddex doolar si ay u buuxiyaan #tattoos ogeysiis gaaban.
6. Tattoo cirif leh
Jidhkaaga ayaa hubaal ah midka ugu fiican, iyo marka aad hesho fikrad macquul ah oo ku saabsan qiyaasta lacagta looga baahan yahay tattoo sare ee tattoo, waxaa laga yaabaa inaad ka soo baxdo fursadda aad ujogto lacag caddaan ah, iyo waqtiga ugu horreeya waxay sameeyaan nidaam ka sarreeya iyo faahfaahinta tattoo-gaaga.
7. Tartanka lugta jilicsan
Waxaad hubaal ka dhigan kartaa in tafaasiishe kasta oo ku takhasusay uu kugu soo dallacayo sida ay u egtahay, waqtiga loo baahan yahay shaqada iyo qalabka loo baahan yahay in la sameeyo.
8. Tattoo walwal leh
Lama duubi doono dukaamada laba ama saddex ah si ay u ogaadaan kharashyada, maaddaama sarkaalku uu dalbanayo inuu kula kulmo ka hor inta uusan qeexin kharashka shaqada.
9. Fikradda naqshadda jilicsan ee jilicsan
Booqashada dukaanku waa mid waxtar leh, maadaama aad heli karto feker caqli ah oo ku saabsan shaqada oo ay ku jiraan, waxaadna heli kartaa feker dheeraad ah oo kharashka ah, oo kuu fasaxaya in aad fuusho wixii isbeddel ah ee qorshaha tattoo laga yaabo inaad ka fikiraysay ku saabsan tahay.
10. Tattoo jilicsan
Waa kuwan fikradaha lagama maarmaanka ah ee ku saabsan qadarka kharashka oo dhan: Qaar ka mid ah meelaha sida caadiga ah way dhib badanyihiin, kicinta qalciga si loo kiciyo eedeymaha.
Faahfaahin dheeraad ah ayaa ku dareysa kharashka, toosinta tooska ah maaha sida qaali ah.
12. Tattoo jilicsan
Qiyaasta waa fikirka ugu muhiimsan ee qiimaha lagaa rabo inaad bixiso. Baaxadda weyn ee cabbirka, kharashka ayaa ka weyn.
13. Tattoo lugta oo dhan
Markaad rabto in xirfadlaha uu kuu sameeyo khariidad gaar ah, waxaad rajeyn kartaa inaad bixiso wax ka badan haddii aad soo qaadatay hab caadi ah.
14. Tattoo lugta nuska ah
Markaad ka heshid qaan-sheege ka yimid farshaxan, waxaad codsan kartaa qorshe lagu xaqiijiyay, hubso khabiiro badan oo takhasus leh ama wax ka bedelaya shuruudahaaga iyadoo la raacayo qorshahaaga maaliyadeed.
15. Tattoo caan ah
Waxaad tixgelin kartaa inaad bedesho bedkaaga tattooadaada, ama jebinayso waxyaabaha aan habooneyn iyada oo aan run ahaantii ka dhaadhicinin fikrad guud. Waxaa laga yaabaa inaadan waxba galin doonin si aad u jimicsatid wakhti yar si aad u hesho lacag caddaan ah oo aad u hesho tattoo sare ee tattoo, sidan oo kale sida diyaar!
16. Tattoo lugta oo dhan
17. Jacaylka tattoo jilicsan
Helitaanka tattoo waa wax u baahan in la adkeeyo iyo tamarta. Waa inaad ku nooshahay shattiga wixii ka hartay noloshaada, haddii aadan u baahnayn inaad bixiso kharashka laysarka, sidaas darteed waa inaad hubisaa in tattoo-yada aad hesho aad tahay wax aad u baahnayd mudo yar.
18. Sawirada lafdhabarta ah
19. Tattoo awood leh
Haddii ay dhacdo inaadan waligaa qaadin tattoo, markaa doorashadu aad ayay u hanjabtay, gaar ahaan sababtoo ah in doorashadu ay run ahaantii tahay laba doorasho tan iyo markii lagaa rabo inaad qaadato tattoo iyo meesha aad ka heli karto jirkaaga.
20. Tartanka Lugaha ee Awoodda leh
21. Inta badan taatuuga lafdhabarta
Markaad ka fekereyso in aad hesho tattoo ama haddii kale, waa inaad doorataa meesha aad ka heli karto jirkaada. Haddii ay dhacdo inaad xirfad ku leedahay maamulka furan, markaa waxaad dooran kartaa inaad ku hesho tattoo ah meel aad ka qarin karto.
22. Tattoo lugaha ubaxa
23. Tattoo jilicsan
Noqo, sida ay u dhici karto, ururada intooda badani, duruufuhu way ka duwan yihiin, dharabtana lama eegin inta badan. Xaqiiqdii, xitaa shakhsiyaadka ka socda bilayska ayaa xiran kara dhar-siinta si ay u muujiyaan, looma baahna inay daboolaan.
24. Tartanka lafdhabarta
Marka aad fursad u leedahay in shaqo-helidu ay sheegto in aad heli karto tattooaga meel kasta oo aad u baahato, markaa doorashada waa gabi ahaanba.
shaatiinka shiidantattoos saaxiib saxa ahsawirada malaa'igtaDhaqdhaqaaqamuusikada muusikadafikradaha tattooTartoo ubax badanwaxaa la dhajiyay tattoostattoo ah octopustattoos cagtacalaamadaha calaamadaha ayaa calaamad u ahlaabto laabtatattoos taajkiitattoos ubaxTilmaamta jaalaha ahtattoos gacantaJoomatari Tattoostattoo tilmaanwaxay jecel yihiin tattoostattoos iskutallaabtaku dhaji tattoossawirada gabdhahasawirrada raggalammaanahatattoos qosol lehtattoos qoortatattoos sleevelibto libaaxtattoos moonsawir gacmeedgaraacista gacmahajimicsiga bisadahatattoos qabaa'ilkatattoo maroodigaarrow Tattootattoo indhahahenna tattootattoo biyo ahnaqshadeynta mehndigadaal u laabotattoo dheemantattoos qorraxdaTattoo infinitytattoosTattoos Wadnahashimbir shimbirtattoos eaglekoi kalluunkataraagada kubbaddaTattoo Feather